Xaaladaha Farsamada ee Soo saarida siddooyin Wanaagsan
Maxay yihiin fargallada wax lagu sido? Giraanta sidata waxaa loola jeedaa biibiile bir ah oo aan xaddidnayn oo kululeynaya ama qabow-duudduuban (qabow soo jiitay) oo loogu talagalay soo saarista giraan isku mid ah. Dhexdhexaadka bannaanka ee biibiile bir ah waa 25-180mm, dhumucdiisuna waa 3.5-20mm, oo loo qaybin karo int ...
Dhalista bilaa saliida ahi runti miyaanay u baahnayn saliid saliidaysa?
Boorsooyinka aan saliida lahayn ayaa ah nooc cusub oo saliid ah, oo leh astaamaha biraha iyo saliidaha aan saliida lahayn. Waxaa lagu rakibay matoor bir ah oo lagu saliiday maaddooyin gaar ah oo saliidayn adag. Waxay leedahay sifooyinka awoodda qaadista sare, iska caabin saameyn, temperatu sare ...
Ma ogtahay waxa qaybaha mashiinka meerisyadu yihiin? Waxaa loo yaqaan "cuntada warshadaha farsamada" waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa qeybaha muhiimka ah ee mashiinada. Sababtoo ah qeybahan muhiimka ah waxay ka shaqeeyaan meel aan la arki karin, badanaa ma fahmaan kuwa aan xirfadlayaasha aheyn. Dad badan oo aan makaanik ahayn ...